Onye egwuregwu maka egwuregwu
E gosipụtara na ọzụzụ maka egwu kwesịrị ekwesị dị irè karị. Ụdị ntụrụndụ ziri ezi bụ ihe mgbakwunye ọzọ na-enyere onye na-eme egwuregwu aka ịkwaga ma ghara ịkwụsị. Ọ dị mkpa ịhọrọ egwuregwu ziri ezi maka egwuregwu, nke na-agaghị egbochi ọzụzụ na ogo nke egwú ahụ a gbanyere edegharị ga-abụ n'elu.
Kedu otu esi ahọrọ onye ruru egwu maka egwuregwu?
Enwere ọtụtụ njirisi dị mkpa ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị zụrụ ụdị ngwaọrụ a:
Ogo ọkpụkpọ ahụ . Usoro a ga-abụ kọmpat, ya mere, ọ kacha mma ịṅa ntị na ọkpụkpọ egwu egwu na nchekwa ọkụ. Ngwaọrụ dị otú ahụ nwere ọtụtụ uru: nchịkọta adịghị akwụsị, onye na-egwu egwu adịghị atụ egwu ikwe ma na-ere ọkụ. Mgbe ịzụrụ, biko dee ma ọ bụrụ naadị dị na kit.
Ụdị playback . Ọ bụrụ na njirimara a bụ ihe kachasị mkpa maka mmadụ, mgbe ahụ, ọ ka mma ịhọrọ ọkpụkpọ MP3 maka egwuregwu na diski ike. Maka ego ncheta, uru ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 1 GB.
Mmetụta dịka . E nwere ọtụtụ nhọrọ: na eriri n'olu, na nkedo uwe maka idozi uwe, nakwa na ikpe maka ịbị aka ma ọ bụ nkwekọrịta. Ọ kachasị mma iyi uwe ahụ ma mee ọtụtụ jumps ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ iji chọpụta ma ọ ga-egbochi ma ọ bụ.
Ogbuisi maka ihe egwu maka egwuregwu . Ha kwesịrị ịdị mma ma nwee mkpuchi dị mma. Maka ime ụlọ, ị kwesịrị ịhọrọ earbuds n'ihi na ha dị obere, na mkpuchi caba na-enye mkpuchi site na mkpọtụ. Ogologo ụdọ ahụ ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 1.2 mita, dịka a ga - etinye ọnyà wires.
Dika nyocha nke kachasi mma maka egwuregwu bu onye na-achoghi ugbua, nke di mfe maka ọzụzụ . Ọzọkwa, ṅaa ntị na ụzọ mgbagwoju anya na ụda ngbanwe, n'ihi na ịkwesịrị ijide ngwaọrụ n'enweghị ịkwụsị site na mmega ahụ, ya bụ, n'amaghị ama.
Egwú maka ọzụzụ na ntụrụndụ
Meniscus nke ikpere ikpere: ọgwụgwọ
Egwú maka ntụrụndụ nke oge ntụrụndụ
Equestrian egwuregwu - na uru na cons, ụdị nke egwuregwu egwuregwu n'oge anyị
Kedu otu esi eji akwa akwa akwa?
Kedu ihe bụ girosculator na otu esi ahọrọ ya n'ụzọ ziri ezi?
Gymnastics nke Rhythmic na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Synovitis nke ikpere nkwonkwo
Ihere na ikpere
Kapet maka yoga
Onyinye maka February 23 hụrụ n'anya
Kedu ihe ụgbọ okporo ígwè na-arọ banyere ya?
Nwa na-eto eto na-enweghị ịkwụsị - ihe ị ga-eme?
Azu solyanka - uzommeputa
Nri kachasị mfe maka ọnwụ
Akwụkwọ ọnụahịa na Finland
Baroque ngwá ụlọ
Ihe oriri kachasị mma
Kedu ihe na-enyere ntinye nke ginger na vodka?
Wayo mmanụ aṅụ - ọgwụ Njirimara na contraindications
Kedu ihe eji agba ụmụ nwanyị?
Kedu ka esi esi mee ihe na teepu?
Nri na soseji
Tomato ihendori - uzommeputa
Enwere m ike ime ime n'ụbọchị ikpeazụ nke nsọ nsọ?
E nyere DiCaprio ihe ngosi ihuenyo nke ndị na-emepụta fim
Katy Perry butere nsonaazụ mbụ ya na onye asọmpi afọ 19 ahụ
Otutu nke chrysanthemums wintering na-emeghe n'ala
Kedu ka esi esi mee ka ebe ahụ sie ike?